लाउरेकी श्रीमती भगाएका खलासी र स्मृती एउटै कोठामा रगेंहात भेटीएपछी खुल्यो यस्तो रहस्य , स्मृतीले रुदै यसो भन्न थालिन ….. (भिडियो हेर्नुस) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ समय: १८:०६:५१
चितवनमा एक युवती आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अर्कैसंग विवाह गरेर गइन् । उनका श्रीमान युट्ुवरलाई लिएर आफ्नो श्रीमती लैजानेलाई खोज्न हिँडे । उनीहरुले ति जोडीलाई वुटवलमा फेला पारे । तर दिन वित्दै जाँदा घटनाले अर्कै रुप लिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका शिवनवरमा भएको घटनामा नयाँ ट्वीष्ट खुलेको हो ।
सानै उमेरमा बुवा आमाले आफु भन्दा निकै जेठो ब्यक्तिसंग विवाह गरिदिए । तर उनले श्रीमानसंग माया पाइनन् । माइतमा दुख विसाउँदा पनि घरमै बस भनेर सम्झाए । माइतीले नहेर्ने, घरमा पनि मलाई कसैले माया गरेन म के गरुँ त सर ? उनले रुँदै भनिन् । माइती जाँदा बाबा आमाले छोरी भएर घर गरेर खानुपर्छ भनेर पठाउने, श्रीमानले पनि माया नगर्ने म कसरी मन बुझाउने सर ?
मलाई मासु खान मन लागेको थियो, श्रीमानलाई भनेँ वास्ता गरेनन्, म घर बाहिर निस्किए राती ९ वजे सम्म बाहिर बस्दा पनि श्रीमानले मेरो खोजी गरेनन् अनि साथीकोमा गएँ, उनले रुँदै सुनाइनन् । माया भए विवाद गरेपनि आउ घर आउ भनेर बोलाउनु पर्छ की पर्दैन ? उनले रुँदै भनिन् । श्रीमानले घर आइज नभन्ने, माइतीले पनि नराख्ने म कहाँ जाउँ त म सडकमा बस्ने ? जम्मा १५ वर्षकी स्मृतीको विवाह २८ वर्षका गोविन्दसंग गरिएको थियो ।
गोविन्द विदेशमा थिए उनी नेपाल आएपछि स्मृतीसंग विवाह गरे । विवाह गरेको २ महिनामै उनी फेरी विदेश नै गए । त्यसको १७ महिना पछि नेपाल आएपछि स्मृती र उनको सम्बन्ध त्यती राम्रो भएन । अहिले यो घटना दोस्रो विवाहमा पुगेर टुंगिएको छ । अहिले स्मृती १७ वर्षका साजनसंग विवाह गरेर बसेकी छन् । सहमति नै भएपनि गोबिन्दले स्मृतीसंग १५ वर्षकी बालिकासंग बालविवाह गरेका थिए । त्यो गैरकानुनी हो ।